Real Madrid Oo Ku Guuleysatay Horyaalka La Liga Kadib Xasuuq Ay Geysatay
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo ku guuleysatay horyaalka La Liga kadib Xasuuq ay geysatay
May 1, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Real Madrid ayaa xaqiijisatay horyaalka La Liga iyada oo ay u hadheen afar kulan oo horyaalka La Liga ah kadib markii ay 4-0 ku garaaceen Espanyol.
Real Madrid oo u baahnayd dhibic kaliya si ay ugu guuleysato horyaalkeedii 35aad ee LaLiga ah ayaa waxay guul weyn ka gaadhay Espanyol iyadoo Carlo Ancelotti uu nasiyey xiddigihiisa waaweyn maadaama ay Arbacada waajahayaan Manchester City lugta labaad ee semi-finalka Champions League.
Xiddiga reer Brazil ee Rodrygo Goes ayaa isku muujiyey ciyaartan, waxaana uu qaybtii horeba saxeexay laba gool oo niyad-jabiyey Espanyol oo dedaal badan samaynaysay, halka qaybtii labaadna ay laba gool oo kale raaciyeen Marco Asensio iyo Karim Benzema oo beddel kusoo galay ciyaarta.
Rodrygo Goes ayaa gool-dhalinta furay daqiiqaddii 33aad, markaas oo kubbad uu ka helay Marcelo uu la galay xerada ganaaxa, dhinacana ka dhigay goolhaye Diego Lopez oo ka mid ahaa halyeeyadii Real Madrid la qaaday Champions League sannadkii 2014kii.
Laba daqiiqadood ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada ayay Real Madrid keentay goolka labaad oo uu si shaqsi ah u xoogsaday Rodrygo Goes, shabaqana ku hubsaday.
Qaybtii labaad ayuu Marco Asensio ku daray gool saddexaad oo sidoo kale khasaariyey fursado kale oo uu goolal ku dhalin karayay. Karim Benzema oo beddel kusoo galay ayaa raaciyey goolka afraad ee kooxdiisa Real Madrid ay dhaliso.
Real Madrid ayaa koobkeedii ugu horreeyey ee horyaalka ah ku guuleysatay sannadkii 1932kii, waxaanay illaa waqtigaas hanteen 35 horyaal oo uu ku jiro midka ay caawa qaadeen.